Isono sami ukuthi ingane ifana nami - Olale nenkosikazi womuntu | isiZulu
Isono sami ukuthi ingane ifana nami - Olale nenkosikazi womuntu
Ushonile oshayelwe ukuthi akabelethenga ngosuku obelulindelwe
Uboshiwe ofake isithombe sakhe kuFacebook ekhulelwe
Ushaywe wumbani washona owesifazane okhulelwe eMtuba
Durban - Izoguga iphakethe indoda yaKwaNokweja eXobho, eningizimu yeKwaZulu-Natal elahlwe yicala lokulala nomfazi kamakhelwane wayo yaze yamkhulelisa.
ILANGA lithole ukuthi la manyala avele ingane isizelwe ineminyaka eyisi-8 ukuthi empeleni uyise ngowakwamakhelwane. Ngemuva kokuvela kwala manyala, umyeni walona wesifazane - esinawo amagama abo kodwa esingeke sibadalule ngenxa yokuvikela ingane - uvule icala enduneni yendawo laze lagcina selithethwa konkosi kwaphuma isinqumo ngoMgqibelo ukuthi umakhelwane makahlawule ngezinkomo ezimbili nezimbuzi ezimbili zokugeza umuzi wendoda.
Umyeni uveze ukuthi ngeke kugcine la, ufuna uyise wengane (umakhelwane) amkhokhele izindleko kusukela ingane isesiswini sikanina, eqala ukuyodla kuze kube yima esethole iqiniso.
Uthi selokhu kwathi nhlo, ukukhulelwa kwale ngane kakuzange kumjabulise njengoba inkosikazi yamtshela ukuthi iyazisola engekho ekhaya ephume nomsebenzi. Kuthe uma ebala izinyanga wathola ukuthi ziyashayisana nezishiwo yinkosikazi.
"Bengihlale ngiyitshela inkosikazi ukuthi nginezinsolo ngale ngane. Kuthe noma isizelwe kwangicacela ukuthi kayizalwa yimina, ibingafani namuntu ekhaya. Bengize ngiyibuze inkosikazi ukuthi le ngane ifuze bani angikhohlise ngokuthi ifuze abantu bakubo asho abantu engingabazi," kusho umyeni.
Uthi kuhambe isikhathi inkosikazi yathola ingane yesibili wabe esehlela ukuthi azenzele iziphandla ahlanganise nengane ayithole ngaphandle engakashadelwa. Uthi izinsolo zakhe zigcwaliseke ngesikhathi esehlaba izimbuzi okuthe uma esenquma eqondene nale ngane angayizali wabhekana nenkinga. Uthi iqiniso uze walithola ngoNhlaba (May) kulo nyaka umfowabo efika ephuzile wayibhadlaza indaba phambi kwakhe ehleli nenkosikazi ukuthi indodana yayo yokuqala kayizalwa nguyena inoyise ongumakhelwane wabo.
"Ngiswele umgodi wokucasha ngamxosha ngalesi sikhathi umfowethu ngithuswa yinto abeyisho yize benginazo izinsolo. Ngakusasa ngiyihlalise phansi inkosikazi ngifuna ingitshele ngalezi zinsolo. Konke ebesikuxoxa bengikuqopha ngomakhalekhukhwini wami ngenzela ukuba nobufakazi bezinto azozisho," kusho umyeni.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwabulawa osomatekisi eKZN
Uthi inkosikazi yakhe iqale ngokuphika kodwa yagcina ivumile, yasho ukuthi bebengathandani kodwa bebephana ngocansi uma yena engekho ephume nomsebenzi. Uveze ukuthi ngesikhathi sekuqulwa icala labo, uyise wengane ugcine ezivumele ngowakhe ukuthi ubethandana nomkakhe kodwa kwaphambana ukukhuluma wathi baqale ukuthanda bengakashadi.
Uthi umakhelwane wakhe ugila le mihlola nje emzini wakhe, naye unenkosikazi yakhe nezingane.
Utshele ILANGA ukuthi ngemuva kokuthola lezi zinsolo, unqume ukuthi kuphele ngomshado wakhe ngoba akasayethembi inkosikazi yakhe.
"Ngiyiyalele ukuba ithathe amasakana ayo iphume iphele emagcekeni omuzi wasekhaya kodwa isahleli namanje," kusho yena.
Umakhelwane olahlwe yicala - lokukhulelisa inkosikazi kamakhelwane wakhe - uthe: "Isono sami ngesokuthi ingane ifana nami. Kangiyazi mina le ngane, udaba ngisazoludlulisela phambili ukuze kuzokwenziwa ulibofuzo," kusho yena.
Ebuzwa ukuthi uvume kanjani ukukhokha inhlawulo uma ethi ingane kakuyona eyakhe, uthe: "Abantu abazibophezele ngokukhipha inhlawulo ngabakithi, kakubanga wumbono wami. Kangihlangene mina nenhlawulo ezokhokhwa."
Uveze ukuthi ubudlelwano bakhe neyakhe inkosikazi buhamba kahle, isamukelile isimo. Ebuzwa ukuthi uthini ngokubhidlika komuzi kamakhelwane wakhe, uthe akazi lutho ngokuqhubeka phakathi kwabo, akwaziyo nje wukuthi uhleli kahle yena nenkosikazi yakhe.
Imizamo yokuthola inkosikazi iphunzile.
ILANGA lishayele inkosi yendawo, iNkosi Sbonelo Mjilo ethe kayivumelekile ukuphawula kwabezindaba ngamacala abantu.